China Vacuum uye Nitrogen Inogona Kusona Muchina Wevacheche Formula vagadziri uye vatengesi |Willman Machinery
Vacuum uye Nitrogen Inogona Kusona Muchina Wemucheche Formula
Nguva yekubhadhara: T / T L / C pakuona
Nguva Yekutumira: 2 seti RTS (Yagadzirira kutumira)
Hunhu : NeNitrogen flushing basa kuchengetedza mukaka hupfu hutsva
Basa: Vacuuming / Nitrogen gasi flushing / Seaming
Zvemukaka upfu mwana formula inogona kuvhara
Muchina uyu rudzi rutsva rwemushini wekusunga chisimbiso wakagadzirirwa indasitiri yekurongedza yemukaka poda, protein poda uye zvimwe zvigadzirwa zvepamusoro.Imhando yemuchina wekuisa chisimbiso wakakodzera kuvhara marudzi ese emagaba etinplate, magaba ealuminium uye mamwe magaba akatenderera.Muchina uyu unobatanidza basa revacuum, liquid nitrogen dosing uye kuisa chisimbiso mune imwe muchina unit.Muchina uyu unotora magetsi akabatanidzwa kudzora, chimiro chemunhu, otomatiki chivharo chekudyisa, otomatiki mukati nekubuda mugaba, otomatiki vacuum uye nitrogen dosing, uye isina otomatiki chisimbiso isina mafuta.Maparamita ekushanda anogona kuiswa nyore nyore pahutano hwevanhu maererano nehukuru hwakasiyana hwemagaba akatenderera.Iwo makuru emagetsi emagetsi ese anotora ekunze ehupfumi zvikamu.
Kaviri Head Automatic Vacuum Nitrogen Seaming Machine YeMetal Can
Paramates ye1 musoro
Paramates ye 2 misoro
Capacity LN2 Dosing Mode
Yasara huwandu hweokisijeni
ApplicableCan Size Can Height
Kudzvinyirirwa kushandiswa kwemhepo
Zvinodiwa nemhepo yakamanikidzwa
D8 mhepo pombi
D10 pombi yemhepo
4 (Kusanganisira vacuum pombi)
3.5+5.5 (kusanganisira vacuum pombi)
3 Chikamu 380V/50HZ
(1) Chitarisiko uye zvikamu zvikuru zvemuchina zvinogadzirwa ne304 simbi isina tsvina;
(2) Chisimbiso chevacuum system inotora vacuum yakakosha fluorine rubber seal ring, inoshingirira kupisa kwakanyanya uye kuvuza-kubuda.
(3) Munhu-muchina interface kushanda, PLC control system, nyore kushanda
(5) Omron chinzvimbo chekutsvaga photoelectric
(6) Pneumatic actuators, solenoid valves, uye silinda nzvimbo yekuona masensa zvese zvinotora Airtac brand.
(7) Pombi yevacuum inotora pombi yevacuum inozivikanwa
(8) Svika Kaviri seaming chimiro chiyero, mune yakanaka yekuisa chisimbiso mhando
(9) Roller inotora zvinhu zvichangoburwa uye nzira dzekurapa kupisa, hupenyu hwesevhisi hunovandudzwa zvakanyanya, mupendero wekupeta wakatsetseka uye yunifomu, hapana zvikweshwa, uye mhando yekuisa chisimbiso inovandudzwa.
(10) Zvinoenderana nezvinodiwa zvekuisa chisimbiso uye yakasara okisijeni, inogona kuchinjika nyore uye kuiswa pane yemunhu-muchina interface.
(11) Kushandiswa kwemafuta-asina mafuta uye ekuchengetedza-asina mabheji anoita kuti midziyo ive yakachena uye inovimbisa nzvimbo yakachena yekushanda mumusangano wekugadzira;
(12) Yese ma actuators anofambiswa nemasilinda nemamotor, izvo zvinoita kuti kusvibiswa kwemafuta kushande mamiriro
(13) Iyo man-muchina interface inopa kukanganisa alarm mabasa senge pasina chivharo, kushomeka kwechivharo, yakavharika tangi, isiri-kudonhedza tangi, servo, silinda, nezvimwewo, kuita kuti kukanganisa kujeke pakutarisa, kupfupisa zvakanyanya nguva yekunetsa uye kuvandudza kushanda kwekugadzira;
(14) Yakashongedzerwa neotomatiki nguva yekuvhaira basa kudzivirira kuunganidzwa kweguruva mukati mevacuum hood.
(15) Kunyanya muvacuuming uye nitrogen yekuzadza nzira, inogona kunyatso kudzivirira guruva kubva pakubhururuka zvakare.
Iyo electromagnetic valve
Zvakapfuura: Chinese wholesale China Pineapple Juice Production Line /Pineapple Processing Machine
Zvinotevera: Ichangobva Kusvika China Carbonated Beverage Automatic Aluminium/ Nyore Dhova Beer Inogona Kuzadza Muchina /Aluminium Can Seamer / Can Seaming Machine / Jar Kuvharisa Muchina
GT4B1D Yakakwira yekumhanyisa yekuzadza chisimbiso yakasanganiswa mach...
Otomatiki Basket (keji) Kurodha uye Kuburitsa ...
Carbonated zvinwiwa aluminium inogona kuzadza uye gungwa ...